WARBIXIN:Manchester City vs Liverpool: 5 Meel Oo Go’aamin Kara Kulanka Adag Ee Caawa – Kooxda.com
HomePremier LeagueWARBIXIN:Manchester City vs Liverpool: 5 Meel Oo Go’aamin Kara Kulanka Adag Ee Caawa
WARBIXIN:Manchester City vs Liverpool: 5 Meel Oo Go’aamin Kara Kulanka Adag Ee Caawa
July 2, 2020 Abdiwali Adan Jamac Premier League, Wararka Maanta, Warbixino 0
Kulanka adag ayaa caawa Etihad ku dhexmari doona kooxda xilli ciyaareedkii hore ku guulaystay premier League iyo kooxda xilli ciyaareedkan ku guulaystay horyaalka premier League.
Liverpool ayaa ku guulaystay horyaalka premier League markii ugu horaysay muddo 30 sano ah waxana ciyaari doonaan kulankii ugu horeeyay tan ilaa markii loo caleemo saaray horyaalka khamiistii todobaadkii hore.
Man City ayaa Liverpool ku marti galin doonta Etihad Staduim markii ugu horaysay tan ilaa markii ay ku fashilmeen difaacashada koobka ay labadii xilli ciyareed ee ugu dambeeyay ku guulaysteen.
Kulanka ayaa ah mid si gaar ah isha loogu hayn doono inkasta oo horyaalka La Go’aamiyay hadana labada kooxood aayaa ah kooxaha ugu fiican premier League xilli ciyaareedkan ciyaartooduna noqoto mid si weyn loogu madadaasho.
Hadaba warbixintan waxa aan ku soo bandhigi doonaa 5 meel oo go’aamin karta kulanka caawa ee horyaalka premier League.
Gabriel Jesus vs Roberto Firmino:
Pep Guardiola ayaa la soo saxiixday Gabriel sanadkii 2017 si uu meesha uga saaro Sergio Aguero. laakiin arintaas ayaan dhicin Aguero-na wali wuxuu yahay dookha 1-aad ee Pep. Gabriel Jesus waa wiil karti leh laakiin rikoor xun ayuu kulamadii ugu dambeeyay waxana uu Man City u ciyaaray in ka badan 140 kulan isagoo dhaliyay 63 gool. Xilli ciyaareedkan waxa uu dhaliyay 18 gool tartamada oo dhan. xiddiga reer Brazil ayaa doonaya in uu dib u helo qaab ciyaareedkiisii fiicnaa si uu u wajaho Liverpool.
Roberto Firmino ayaa Liverpool kaga soo biiray Hoffenheim sanadkii 2015 waxana uu ciyaaray dhamaan 31 kulan ee Liverpool xilli ciyaareedkan premier League waxana uu dhaliyay 8 gool halka uu caawiye ka noqday 7 kale Tani waxay muujineysaa sida uu muhiimka ugu yahay nidaamka Klopp. Waxaa la filayaa inuu hogaamiyo weerarka kooxda Reds kulanka caawa, xiddiga ayaa dib u raaca kubada marka ay kooxda kale haysto waana sababihii ugu weynaa ee ay Liverpool uga hadhay la soo saxiixashada Timo Werner.
Riyad Mahrez vs Sadio Mane
Riyad Mahrez ayaa ku soo biiray kooxda Man City bishii July 2018 isaga oo kaga soo biiray kooxda Leicester City. Si kastaba, xilli ciyaareedkii hore wuxuu ku soo bilaabay kaliya 14 isaga oo ka dambeeyay xiddiga Bernardo Silva laakiin xilli ciyaareedkan waxa uu Mahrez u muuqdaa mid muhiim ka ah kooxda Man City waxana uu ciyaaray 26 kulan isaga oo ku lug lahaa 17 gool (9 gool iyo 8 caawin) waana xiddig isha lagu hayn doono kulanka caawa ee kooxdiisu la ciyaari doonto Liverpool waxana uu shaki la’aan dhibaato ku keeni doonaa xiddiga Robertson ee daafaca Bidix.
Sadio Mane ayaa ku soo biiray Liverpool sanadkii 2016 kana yimid kooxda Southampton. Tan iyo markii uu yimid, wuxuu ka ciyaaray boosas badan oo weerarka ah, markii hore waxa uu ka ciyaari jiray garabka midig ee weerarka laakiin markii uu yimid Kooxda Salah waxa uu u wareegay garabka Bidix 15 gool oo premier League ah waxana uu isha ku hayaa in uu mar kale shabaqa soo taabto kulanka caawa.
Waa iska hor imaadkii uu taageero walba oo premier League ah doonayay De Bruyns vs Henderson waa iska hor imaadka labada xiddig ee ugu cad-cad ku guulaysiga xiddiga ugu fiican premier League De Bruyne ayaa xilli ciyaareedkan Man City u saftay 29 kulan waxana uu dhaliyay 10 gool iyo 26 caawn.
DHanka kale Jordan Henderson ayaa ah awoodii ka dambaysay ku guulaysiga Liverpool ee Premier League waxana uu ciyaaray 27 kulan waxana uu dhaliyay 5 gool iyo 5 caawin.
Kyle Walker vs Trent Alexander-Arnold:
Waa laba xiddig oo isku dagaali doona booska daafaca Midig ee xulka qaranka England sanadka dambe ee tartanka Euro 2021, Walker iyo Trent ayaa iska hor iman doona kulanka caawa.
Kyle Walker wuxuu muhiim u ahaa City tan iyo markii uu kaga soo biiray Kooxda Tottenham sanadkii 2017 waxa uu ahaa mid cajiib ah tan ilaa markii uu Guardiola yimid kooxda shaki la’aana waxa uu ku bilaaban doonaa kulanka caawa ee Liverpool Waxa uu dhaliyay kaliya seddex gool oo horyaalka xilli ciyaareedkan.
Xiddiga da’yarka ah ee ku dhashay Liverpool ayay dad badan ku magacaabaan daafaca Midig ee ugu fiican wakhti xaadirkan premier League waxana uu xilli ciyaareedkan soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah isaga oo dhaliyay 2 gool 12 kalena caawiye ka noqday 31 kulan oo premier League ah.
Ederson Moares vs Alisson Becker:
Ederson ayaa ku soo biiray Citizen sanadkii 2017 wuxuuna si dhaqso ah u noqday goolhayaha 1-aad ee Man City waxana uu booska kala baxay Claudio Bravo. Waxa uu haatan u ciyaaray City 140 kulan isaga oo 28 kulan ku bilowday xilli ciyaareedkan shabaqiisana ilaashaday 11 kulan waxana uu sidoo kale sameeyay 55 badbaadin waxana uu u baahanyahay in uu ku jira qaab ciyaareed fiican ka hor kulanka Liverpool.
Alisson Becker ayaa Liverpool joogay labo xilli ciyaareed haatan waxana uu kaliya ciyaaray 22 kulan horyaalka xilli ciyaareedkan sabab la xidhiidha dhaawac waxana uu shabaqiisa ilaashada 12 kulan waana in ka badan Ederson waxana uu sameeyay 48 badbaadin oo horyaalka premier League ah.
Sii Akhriso: Dalka Shiinaha Oo Si Kulul Uga Hadlay Heshiiskii Dhexmaray Somaliland Taiwan
Harry Redknapp Oo Saadaaliyay Halka Ay Man United Kaga Dhamaysan Doonto Premier League Xilli Ciyaareedkan.
Rio Ferdinand Oo Kashifay LABA Sabab Oo Uu Pierre-Emerick Aubameyang U Diidanyahay Heshiiska Cusub Ee Arsenal.